Mobilenomics: Kana Iwe Usiri Wekufambisa, Hausi Kushambadzira | Martech Zone
Tinonzwa zvakanaka kuti tinoona tekinoroji maitiro achiuya uye ndokuzivisa iwe pamberi penguva. Isu tanga tichitaura nezve iyo kukura nhare kweinopfuura gore ikozvino, asi vakashamisika patakangoita ongororo yekugadzirisa kune mutengi achangoburwa uye vanga vasina zano rembambo… hapana. Saiti yavo yanga isiri nhare, maemail avo haana kugadzirirwa nhare, uye hapana nharembozha padhuze… nada.
Dzimwe nguva zvinotora vhidhiyo kuti uwane maonero akanaka pazvinhu uye Erik Qualman inoita basa rakakura pakuisa manhamba ekurera ekurera mukutarisa. Icho chokwadi ndechekuti ... kana usiri nhare, hausi kushambadzira.
Tags: erik qualmanmobilenomicsqualmanyemagariro
Kushambadzira kwenhare kuri pano kugara, hapana kupokana nezvazvo. Makambani anotadza kufunga nezve izvi achange ari mudambudziko rakawanda mubasa ravo rekutungamira chizvarwa. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti mapeji ako ekumhara anomiririra brand yako, zvisinei kuti ndeipi mudziyo unoshandiswa kuwana iwo.